Botco.ai: HIPAA-Inoenderana Inotaurirana Kushambadzira Solution | Martech Zone
Botco.ai's HIPAA-Inoenderana yekukurukurirana chikuva inoramba ichienderera mberi, ichiwedzera Contextual Chat Kushambadzira uye yepamusoro analytics dashibhodhi.
Contextual Chat Kushambadzira inogonesa vashambadzi kutanga hurukuro dzakagadziriswa netarisiro uye vatengi zvichienderana nekuti vauya sei kuzoshanyira webhusaiti yekambani kana zvivakwa zvemidhiya.
The itsva analytics dhibhodhi inopa nzwisiso yakadzama mumibvunzo yevashanyi uye maitiro.
Pamwe chete nekubatanidzwa kwaBotco.ai neemail, CRM, uye mamwe maratidziro ekushambadzira, Contextual Chat Marketing inounza nhanho yekushambadzira kwekushambadzira izvo zvisati zvamboitika muindasitiri.
HIPAA inomirira iyo American Hutano Inishuwarenzi Portability uye Kuzvidavirira Mutemo wa1996, uye inochengetedza seti yemirau, mitemo, uye maitiro anofanira kuteverwa navanachiremba, zvipatara, uye anoshanda kumatekinoroji avanoshandisa. HIPAA inobatsira kuona kuti zvese zvinyorwa zvekurapa, kubhadharisa zvekurapa, uye maakaundi evarwere zvinosangana nemimwe mirawo inoenderana nezve zvinyorwa, kubata, uye kuvanzika. HIPAA-inoenderana netekinoroji ine hunyanzvi, hwemuviri, uye hwekutarisira dziviriro yekuona kuti data rinochengetwa rakavanzika, rinowanikwa kune avo chete vane mvumo, rinoongororwa, magwaro ekupinda anochengetedzwa zvakanaka, vashandi vanodzidziswa nemazvo, uye maitiro anoteedzerwa kana paine kukanganisa yeruzivo rwavo rwehutano.
HIPAA Chinyorwa - HIPAA Kuteedzera Rondedzero
Botco.ai chigadzirwa chinosanganisira:
Web chat - seamlessly wedzera webchat kune yako iripo webhusaiti kubvumidza vashandisi kubvunza mibvunzo, bhuku kusarudzwa, uye kudzidza rumwe ruzivo nezve yako sevhisi. Uyezve, haudi live live staff 24/7 kubata mibvunzo! Unyanzvi hwedu hunovapindura iwe mukutaurirana, nehunyoro nzira.
Facebook Messenger - shandisa Botco.ai muakaundi yako yeaka Facebook account, uchibvumira vateereri vako kubvunza mibvunzo uye kugamuchira mhinduro mumasekondi.
Botco.ai Contextual Chat Kushambadzira
Botco.ai's Contextual Chat Kushambadzira inoteedzera kunobva vashanyi kune webhusaiti yekambani, Facebook peji, kana zvimwe midhiya zvivakwa, kungave kubva kune yakabhadharwa kushambadza, email mushandirapamwe, kana zvimwe zvekufambisa masosi. Chinhu icho chinobva chagonesa Botco.ai kugadzirisa hurukuro nevashanyi zvichibva pane izvo zvekutumira zvinyorwa
muenzaniso: shambadziro inokurudzira vashandisi kunyorera musangano ichatanga hurukuro nezve inguva yakanaka nenzvimbo yekuzvironga, nepo mushandirapamwe uchisimudzira chimwe chigadzirwa unopa zvirimo zvemukati nezve izvo zvigadzirwa uye mabhenefiti, ichipa chiitiko chakakomberedzwa kana chakasarudzika.
Nekugadzirisa kutaurirana kunoenderana nekutumira masosi, vatengesi vave nekukwanisa kuwedzera zvido zvaunoda zvakawanda uye shanduko mitengo yakateedzerwa muA / B kuyedzwa kusvika kusvika pa103 muzana.
Botco.ai Analytics Dashibhodhi
Iyo analytics dashibhodhi inopa vashambadziri kuoneka kuzere mukati meiyo yakazara ruzivo rwekutaura nekutsvaga mibvunzo inodzokororwa, ichipa ruzivo mukati mevashandisi vatsva zviito uye zviito, uye kuongorora chat fannel performance. Iyo dashboard inoputsa yega yega kuyerera kune tsika-yakatsanangurwa zvinangwa kuitira kuti vashambadzi vayedze rwendo rweumwe neumwe mushanyi
Vashambadziri vanogashira granular nhanho yemashoko anovabvumidza kuti vaongorore uye vaone kudonhedza mwero mune yega yega faneli inobudirira uye kugadzirisa kopi, kuyerera, uye nhanho dzinoendesa kukutendeuka. Aya mazano anobatsira makambani kuita zvirinani, zvine ruzivo chigadzirwa, kushambadzira uye sarudzo dzevatengi.
Botco.ai zvakare inosangana neCRM yekambani, email uye mamwe maratidziro masisitimu kuburikidza neakananga maAPIs kuitira kuti igone kutaurirana nevashanyi zvichibva mukubatana kwavo nekambani, kusanganisira nhoroondo yekutenga, kureba kwehukama hwavo, chinzvimbo chemitezo, nezvimwe. Kubatanidza dhata kubva parwendo rwevatengi kunoita kuti Botco.ai ibudise ruzivo rwakapfuma uye rwakasarudzika kupfuura echinyakare chatbots apo ichigadzirisa hunhu nekutengesa maitiro.
Vanoona nezvehutano, semuenzaniso, vanogona kubata nhaurirano dzinoenderana nezvenhoroondo yemurwere, vachivavimbisa kuti chero ruzivo rwavanogovana panguva yekutaura rwakavanzika uye HIPAA inoenderana. Botco.ai's Contextual chat inoshandisa zvakavanzika-zvakachengeteka nzira dzekumisikidza dzisingavimbe nechero mazita ekuzvizivisa, zvinoenderana neGDPR, CCPA, HIPAA, uye nemitemo inoenderana neyakavanzika.
Ronga Kufona neBotco.ai
Tags: BotBotco.aitauriranaichat botkutevedzeranezveutanoHIPAAhipaa-inoenderanawebhusaiti chat